Imeju | Ọkọwa Okwu Ahụike
Gịnị Bụ Ọrịa Imeju? Ozi Ọrịa Imeju
Gịnị Bụ Ọrịa Imeju?
Imeju na-arụ ọrụ dị mkpa n'ọtụtụ usoro ahụ gị. Ọ bụ akụkụ ahụ kachasị ukwuu ma dịrị n'okpuru akụkụ ọgịrịga gị n'akụkụ aka nri nke afọ gị.
Gịnị Bụ Mgbapụta Ọrịa Imeju?
Ọ naghị adị mfe nchọpụta mgbaàmà nke imeju.
Imeju bụ akụrụngwa kacha mkpa n’ahụ mmadụ ma ọ bụrụ na ọ ga-adị ọcha, na-agwọ ma na-ewepụ ya. Enweela ọtụtụ narị ọrụ ịme otu mgbe ma bụrụ ihe dị ịtụnanya nke na-anagide ọtụtụ mmetọ ma nwee ike ịmaliteghachi onwe ya ngwa ngwa.